भरिएका अण्डाहरूसहित मीटबलहरू कला इन्द्रिय - घर र बगैचा को लागी विचारहरु
भरिएका अण्डाहरूसहित मीटबलहरू
18.07.2014 द्वारा पोष्ट गरिएको: कला संवेदना
खाद्य व्यवस्था र सजावट, गृह विचारहरु, व्यंजनहरु
भरिएका अण्डाहरू एक सामान्य एपेटाइजर हो, तर मान्स्ड गरिएको मासु कटलटहरू मा तिनीहरूलाई एक्लै प्रयोग गर्नाले उनीहरूलाई रमाइलो र रसीला मीट डिशको हिस्सा बनाउँदछ। हेजहोग आकारको कलात्मक व्यवस्थाले टेबल वरिपरिका सबैलाई प्रभावित पार्दछ, र स्वादले तिनीहरूलाई मोहित पार्दछ। यो एक यस्तो नुस्खा हो जुन तयार गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ तर धेरै खुशी ल्याउन सक्छ, विशेष गरी बच्चाहरूको लागि। कीमा मासु तयार गर्नका लागि केहि नियमहरू छन्, जुन हामी तल छलफल गर्नेछौं, तर सामान्यतया, यो विचार लगभग कुनै पनि व्यक्तिबाट आउँदछ जुन भान्छाको अनुभव कम छ।
उत्पादनहरू आवाश्यक छन् (10 हेजहोगहरूको लागि):
10 मध्यम आकारको अण्डा
1 खट्टा क्रीम
2-3 लसुन लौंग (स्वाद गर्न)
नुन र मिर्च स्वाद को लागी मासु आवरणका लागि:
1.5 किलो। कीमा बनाइएको मासु (प्राथमिकताका मिश्रण)
प्याज स्वाद गर्न
रोटी पानीमा भिजेको
नुन र मिर्च स्वाद को लागी
स्वादका अन्य स्वादहरू
1-2 फैलाउनका लागि अण्डाहरू भाँचे सजावटको लागि:
जैतुन वा कालो मिर्चको टुक्रा
अण्डो उमाल्नुहोस् (दृढतापूर्वक) र आधा लम्बाइमा काट्नुहोस्। तपाईंको लागि पछि सजिलो बनाउन प्रोटिनहरूलाई जोडीमा समूहबद्ध गर्नुहोस्। योक निकाल्नुहोस् र पकाइएको गाजर, चीज, क्रीम र लसुनको साथ गार्निश गर्नुहोस्। ईच्छा अनुसार स्वाद गर्नुहोस् र अलग गरिएको प्रोटीन आधा भाग भर्नुहोस्। आधा ब्लेन्ड गर्नुहोस् र तपाईं भरिपूर्ण अण्डा पाउनुहुनेछ।
प्याज, मसला र रोटी थप्दै पात्रो तयार पार्नुहोस्। रोटी पानी वा पानी र दाखमद्यको मिश्रणमा भिजाईन्छ, तर ताजा दूध होइन, र यसको मात्रा सीमामा निर्भर गर्दछ। प्राथमिकतामा, किन्न मासुको मासुमा सुँगुरको मासु मात्र हुन्छ। बनावट र मासुको प्रकारमा निर्भर गर्दै, रोटीमा किन्डामा थपियो। धेरै राम्रो मिश्रण पछि, एक प्लास्टिक द्रव्यमान प्राप्त गर्नु पर्छ। यदि तपाइँ मासुको रस अधिकतम बनाउन चाहानुहुन्छ, कच्चा अण्डा नहुनुहोस् जब घुँडा टेक्नुहोस्, मात्र यसलाई फैलाउनको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। मुठीभर कीमालाई रोल आउट गर्नुहोस्, भरिएका अण्डालाई बीचमा राख्नुहोस् र बलमा रोल गर्नुहोस्। थोरै घुमाइएको र गर्वले बढाएको हेजहोग बनाउनुहोस्, पिटेको अण्डा र बेकिंग कागजमा स्थानको साथ फैलियो। स्पगेटीबाट टुक्रिएको टुक्राबाट, "स्पाइन्स" र जैतुन वा कालो मिर्चको आकार बनाउँनुहोस् स्नुउट र आँखा बनाउन। हेजहोग स्टफिंग प्यान प्रिहिएटेड 220 ° C ओभनमा राख्नुहोस् र ब्राउन गोल्डन नभएसम्म बेक गर्नुहोस्। तातो सेवा र तपाइँको मनपर्ने तरकारी संग। स्पेगेटी स्पाइनहरूमा क्रन्ची स्वाद हुन्छ (जस्तै ब्रेडक्रम्ब्स) र खाद्य हुन्, तर खानु अघि हटाउन सकिन्छ।
खाना व्यवस्था, कलात्मक खाना सजावट, कलात्मक खाना, कलात्मक रूपमा खाना तयार, विचारहरु, खाद्य विचारहरु, एक थाल को विचार, कीमा र अण्डाहरूसँगको विचार, कीमा मासु, अण्डाहरूसँग किन्नुहोस्, कीमा बनाइएको मासु कटलटहरू, भरिएका अण्डाहरू, कीमा बनाइएको मासु नुस्खा, अन्डा नुस्खा, व्यंजनहरु, हेजहोग, कीमा को हेजहोग, अण्डाबाट हेजहोगहरू, घर को लागी विचारहरु, आन्तरिक डिजाइन, फर्नीचर, आन्तरिक विचारहरू, डिजाइन विचारहरु, आधुनिक घर, सजावट विचारहरु, कलात्मक विचारहरू
ईस्टर तालिका व्यवस्था
धेरै सुन्दर, सुन्दर ढंगले व्यवस्था गरिएको इस्टर टेबल। सेतो फेसनदार छ! पेस्टल रंग ...
आफैलाई एक तेल बत्ती बनाउन
प्राकृतिक ज्वालाले सँधै घरमा सान्त्वना प्रदान गर्दछ र सबै भन्दा भविष्यका साथ पनि मिल्दछ ...
गुलाबको आकारमा सुन्दर भुटेको आलुको सेवा गर्नुहोस्। आलु काट्नुहोस् वा ग्रेरेट गर्नुहोस् ...
"सौर" घर सजावट
तपाईंको घरमा सूर्य राख्नुहोस्! सजावटको लागि वा प्राथमिक उच्चारणको रूपमा पहेलो प्रयोग गर्नुहोस्। उपयुक्त ...
आधुनिक दृश्यको साथ वन घर
जब यो वनको घर आउँदछ, ठोस काठ प्रायः हाम्रो दिमागमा देखा पर्दछ ...
Churos - परम्परागत स्पेनिश Tolminbi
चुरो / चुरोस भनिने मिठाई मीठो स्टीम्ड पिठो तयार पार्नको लागि छिटो र सजिलो छ।
यो आफै गर्नुहोस् फूल बगैंचाको फूल ओछ्यानमा गर्नुहोस्
एक मानिस आफैंलाई एक कलात्मक बगैचा सजावट बनाउन को लागी धेरै अभिव्यक्तिहरु छन्, तर अभिव्यक्ति ...
इस्टर अन्डा को सजावट को लागी एक मूल विचार
यस प्रविधि ईस्टर अन्डा को सज्जा को लागी हस्तान्तरण गरी नयाँ र सजिलो विचार प्रस्तुत गर्दछ।